Deg deg:Ilkacase iyo Sharma boy oo si xun baalasha uga rifay Dahir Calasow. - xog baahiye
Waxaa durbadiiba soo cusboonaaday dagaalkii qaraaraa ee u dhexeeyay Sharma boy iyo Dahir Calasow.
waxaana markan dagaalka qeyb ka ah Ilkacase qeys oo garab siinaya Sharma boy.
Sir culus oo aannu helnay ayaannu ku ogaannay in Dagaalka uu dib usoo cusbooneysiiyay Ilkacase Qeys kaasi oo curiyay hees qorshaheedu uu ahaa in uu ku karbaasho Dahir calasow.balse waxaa heesta codsaday in uu qeyb ka noqdo Sharma boy oo horay ugu cadheysnaa Dahir Calasow.
AKHRISO: Fashil:King ck oo muuqaal sir ah laga duubay,arrin mucjiso ah na bannaanka soo dhigay.
Dhanka kale Ilkacase qays ayaa goor sii horreysay weerar kan oo kale ku qaaday Dahir Calasow, kadib markii uu Dahir si xun u bahdilay Naciimo jokar oo ah xaaska Ilkacase.
weerarkani ayaa noqon kara mid dhaliya dagaal hor leh kaasi oo si xun saameyn ugu yeesha hadalahaynta isbuuca ee baraha bulshada.
AKHRISO: Secrative marriage of khadar keyow has being revealed
Waa markii ugu horreysay Ilkacase uusan shaacin hordhaca heestiisa.waxeyna qaadatay in uu heestan kusoo saaro keliya saddex maalmood.
Qaar kamid ah ereyada heesta ayaa ah:
“Ma anuu iga maseyray naasa weyn kani soo xiro baati darbi jiifyahow”